Fomban-drazana Venezoelana, inona ireo fomban-drazana Venezoeliana? | Fitsangatsanganana tanteraka
Fomban-drazana an'i Venezoela
Venezoelà tanteraka | | Venezoela
Firenena manan-karena i Venezoelà izay mifangaro kolontsaina telo samy hafa toy ny Espaniola, ny vazimba teratany ary ny Afrikanina. Ary porofon'izany ny ampahany lehibe amin'ny fomban-drazana sy fomban-drazana ao Venezoela izay nalaina avy tany ivelany, indrindra fa avy any Espana sy avy amin'ny firenena afrikana maro. Ny kolontsain'ny vazimba teratany koa dia nisy akony lehibe tamin'ny fomba amam-panao malaza eto amin'ny firenena, raha ny marina, dia ampahany manan-danja amin'ny firenena ankehitriny ireo foko indizeny isan-karazany mbola misy ao Venezoela, izay ahitantsika ny Warao ho iray amin'ireo foko be solontena indrindra an'ny firenena miaraka amin'ny Yanomamis.
Na dia maro aza no mihevitra ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana, dia tsy maintsy dinihina fa samy manana ny fihaviany avy izy rehetra. Amin'ny fomba fanao dia azontsika atao ny mandinika ny fanaon'ny Venezoeliana miorim-paka izay mamaritra azy ireo ho vahoaka. Ny ankamaroan'ny fomban-drazana Venezoeliana dia avy amin'ny eropeana, afrikanina ary mazava ho azy fa zanatany. Ny faritra tsirairay dia samy manana ny fomba amam-panaony, fanolorantena tena ho an'ny olo-masina, angano malaza ary fety malaza indrindra aseho.
Fa kosa ny fomban-drazana Venezoeliana manandrana mitazona ny kolontsaina nolovaina tamin'ny loholona izy ireo. Ny fisehoan'ny kolontsaina nentindrazana dia ampitaina amin'ny taranaka mifandimby izay mamela antsika hankafy lalao, sakafo, fitenenana, zavamaneno, dihy ary koa zavatra marobe izay mampifangaro antsika amin'ny lasa. Ao anatin'ny fomban-drazana Venezoeliana no ahitantsika maro an'isa amin'ireo solontenan'ny fanjakana samihafa mandrafitra ny firenena. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanangona ireo izay tena solontena.
2 Hira nentim-paharazana
4 Dihy nentin-drazana Venezoeliana
5 Devoly mandihy
6 Fandevenana ny Sardine, iray amin'ny lovantsofina ao Venezoela
7 Fetin'ny Saint John
8 Fatana Caracas
9 Ny foara San Sebastián
10 Papelones avy any Tacarigua
11 Passion an'i Kristy
12 Fandoroana an'i Jodasy
13 Satroka Bud
14 Paraky sy kalila
15 Fomban-drazana mpanao asa tanana Venezoeliana
16 Fomban-drazana noely any Venezoelà
Ny maritrano Venezoeliana nentim-paharazana dia fitambaran'ireo kolontsaina indizeny nentim-paharazana miaraka amin'ireo kolontsaina samihafa entina avy any ivelany, toy ny tranga hafa mampiavaka ny firenena. Ny fitaovana ampiasaina ary ny teknika ampiasaina dia mitovy amin'ny nampiasain'ny razana, fa ny fampifanarahana ny tontolo iainana sy ny fanovana orthographic an'ireo faritra nametrahana azy ireo.
Ny hazo, miaraka amin'ny tehina sy mololo no fitaovana lehibe ampiasain'ny foko isan-karazany amin'ny firenena hananganana ireo tanàna onenan'izy ireo ary hita manerana ny atsimo atsinanan'ny firenena. Any amin'ny faritra ahondrahan'ny renirano, ny trano mitsingevana izay miorina amoron'ny renirano dia antsoina hoe trano mihady ary dia namboarina tamin'ny fitaovana mitovy amin'ny taloha.
Any amin'ny faritra an-tendrombohitra dia tsy tampon-trano intsony ireo trano hipetrahan'izy ireo clasa tena trano ary aiza no ahitantsika patio afovoany, lalantsara misy ireo efitrano sy lalantsara samihafa. Ny olana amin'ity karazana fananganana any an-tendrombohitra ity dia ny fetran'ny faritany apetrany.
Miankina amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena izay tsidihintsika, na ny Andes, ny morontsiraka, ny ala mikitroka na ny lemaka, ary miankina amin'ny ora amin'ny andro, dia afaka mahita ny fomba ahafahan'ny mponina maneno hira samy hafa. Ireo hira nentin-drazana mahazatra asehoy ny traikefa miaraka amin'ny mponina isan'andro. Ireo hira ireo dia noforonina ho toy ny hira gadona miaraka amin'ny lahasa andavanandron'ireo lehilahy sy vehivavy manao fampisehoana isan'andro eny an-tsaha. Ireo hira ireo dia nalaina tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany izay nampiasana andevo mainty tany an-tsaha ary nampiasan'izy ireo ireo hira ireo hanehoana ny alahelony, ny fifaliana, ny zavatra niainany ...
Ny chinchorro no harato mahazatra mihantona amin'ny sisiny roa mba hatoriana na hiala sasatra mandritra ny ora maro, fantatra koa amin'ny anarana fandriana fihantona. Izy io dia vita amin'ny kofehy moriche, be mpampiasa amin'ny fanaovana vokatra asa-tanana mahazatra eto amin'ny firenena. Ny chicharros voalohany dia novokarina toy ny ankehitriny ihany, namaky kofehy telo tamin'ny hazo roa niraikitra tamin'ny tany mba hahafahana manenona ny meshes ary ahafahana mamatotra azy ireo amin'ny antsasa-kambana ary hahatonga azy ireo halehibe tadiavina.
Dihy nentin-drazana Venezoeliana
Ny dihy nentim-paharazana marobe misy ao Venezoela dia vokatry ny fifandraisan'ny lova eoropeana, indrindra ny Espaniola, amin'ny vazimba ary, amin'ny lafiny kely kokoa, nataon'ny Afrikana. Samy manana ny mampiavaka azy ny dihy tsirairay fa izy rehetra mbola mitahiry ny votoatin'ny metisy Venezoeliana, mpino sy falifaly izy ireo. Ny dihy nentin-drazana Venezoeliana be solontena indrindra ao amin'ny firenena dia ny Sebucán na Palo de Cinta, ny Turas ary ny Maremare.
Ny Sebucán na Palo kofehy vita tamin'ny Eoropeana dia misy mandihy manodidina ny hazo, indrindra fa ireo fombafomba mankalaza ny fahatongavan'ny lohataona. Las Turas dia dihy ara-pivavahana majika mahazatra avy amin'ny fiaviana teraka izay ankalazaina amin'ny faran'ny volana septambra hatramin'ny misaotra natiora amin'ny tombony azo raha mbola be ny vokatra. Farany hitantsika ny dihy Maremare ho fanomezam-boninahitra ny maty. Ny tonon'ireo dihy ireo dia novolavolaina ary ny dihy dia misy ny fanaovana dingana mandroso sy mihemotra.
Isan-taona amin'ny fankalazana ny Corpus Christi, izay anamafisana ny finoana ara-pivavahana sy majika momba ny tsara amin'ny ratsy, dia dihy fombafomba no ataon'ny Devoly mpandihy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena. Ny devoly dia maneho an'i Losifera manao akanjo miloko sy sarontava izay maneho ny fikasana hitolo-batana amin'ny fanasan'ny Tompo masina indrindra.
Ny devoly dia voakambana amina vondrona na fiaraha-monina, mitondra lakroa, sapile na agulet ara-pinoana izy ireo ary mandritra ny fety dia mivavaka am-bavaka, ao anatin'izany ny lamesa. Manao pataloha mena, lobaka ary kapa izy ireo ary koa manao lakolosy sy bibilava mihantona amin'ny lambany izy ireo. Ireo sarontava dia natao tamina loko sahisahy sy endrika masiaka, na farafaharatsiny izay no ezahin'izy ireo atao. Ny akanjon'ny devoly dia misy kojakoja isan-karazany toy ny rambony, ny lakolosy, ny iraka ary ny maraca. Amin'ny maha fomba amam-panao tena malaza manerana ny firenena, afaka mahita devoly mpandihy isan-karazany zaraina manerana ny firenena isika, fa ny tena zava-dehibe dia ny an'i Yare, Naiguatá ary Chuao.
Fandevenana ny Sardine, iray amin'ny lovantsofina ao Venezoela
Toy ny any Espana, ny fandevenana ny sardine no fisehoana malaza manakatona ny tsingerin'ireo fetin'ny Fetibe ary manome antoka fa hankalazaina indray izy amin'ny taona manaraka. Ny Fetibe Fetibe dia mifandray amin'ny fanazaran-tena ny fampiofanana taolan-kisoa, izay antsoina hoe sardine ary manondro ny fandrarana ny fihinanana hena nandritra ny andro Karemy. Taloha dia nino fa io fihetsika io dia ny hitaona ny jono tsara sy ny fahavokarana amin'ny biby izay hiantoka ny sakafo amin'ny ho avy.
Ny filaharan'ny fandevenana ny sardine dia tarihin'ny mpampanoa lalàna izay misahana ny fanadiovana ny arabe izay handalovan'ny fandevenana ny sardine, arahin'ny zazalahy alitara sy pretra iray izay arahan'ny filaharam-pandevenana misy kalesy voaravaka fanolorana samy hafa voninkazo. Ao anaty mitsingevana misolo tena ny sarin'ny sardine.
Fetin'ny Saint John
Ankalazaina toy ny any Espana izy io amin'ny 24 Jona ary mankalazà ny nahaterahan'ny olo-masina. Ity fankalazana ity dia mampivondrona mpino sy mpivavaka be dia be any amin'ny fanjakana izay ankalazana azy, satria tsy mitovy ny fankalazana azy any amin'ny fanjakana rehetra ao Venezoela. Amin'ny 24 Jona vao mangiran-dratsy dia vonona ny hiala ao amin'ilay trano misy azy any am-piangonana ilay olomasina ary miaraka amina mpivavaka be fatratra izy ireo ary amin'izany dia tonga ny fankalazana faobe izay manomboka mamerina ny amponga mamaky ny tanàna iray manontolo, miaraka miaraka amin'ny olo-masina izay mandray ny fankasitrahan'ny mpino rehefa mandalo izy.
Ny nahandro nentim-paharazana Venezoeliana dia tsy nateraky ny hafanan'ny mpahandro lehibe, na ny nahandro ny trano fisakafoanana mahafinaritra, ny sakafo Caracas mahazatra Teraka tao an-tranon'ireo Venezoeliana izy, vokatry ny asany sy ny fitiavany mahandro ary ho an'ny fiezahana mahazo ny betsaka amin'ny sakafo azony avy tamin'ny saha sy ny biby. Rehefa nanomboka nitandrina ny lakozia ny vehivavy, ny sakafo Caracas dia natomboka tamin'ny famokarana tsindrin-tsakafo sy vatomamy, indrindra fa ny mpanompo no niandraikitra ny fanaovana ny sakafo, mba hanandrana hanomezana fahafaham-po ireo mpiaro.
Toy ny fomban-drazana Venezoeliana hafa, sakafo Venezoeliana Tena mitaona azy ny Espaniola, Afrikana ary amin'ity tranga ity dia teratany ihany koa. Ny lovia venezoeliana mahazatra dia fasika katsaka, sado mainty, mofomamy aubergine ...
Ny foara San Sebastián
Ny foibe iraisam-pirenena San Sebastián dia iray amin'ireo lovantsofina Venezoeliana manan-danja indrindra ao amin'ny firenena. Ankalazaina ao an-tanànan'i San Cristóbal, any amin'ny fanjakan'i Táchira izy io, amin'ny tapany faharoa amin'ny volana Janoary. ihany koa fantatra amin'ny hoe Fairfighting Fair of Venezuela Io no toerana mety indrindra ho an'ireo tia ady omby eto amin'ny firenena mba hankafizany ireo mpiady omby lehibe manerantany.
Misarika mpitsidika vahiny marobe ity tsenabe ity ary traikefa iray izay manolotra fahafaha-manao fialamboly tsara ao amin'ny fanjakan'i Táchira toy ny any amin'ny firenena iray manontolo, satria ankoatr'ireo mpiady omby manana laza iraisam-pirenena ekena dia manatrika ny foara ihany koa ireo matihanina lehibe eto amin'ny firenena, izay tsy vitsy.
Papelones avy any Tacarigua
Tacarigua dia ahitàna vondrom-piarahamonina manjono sy mamboly ao amin'ny nosy Margarita. Nandritra ny taona maro dia nanao ny takelaka fanaovan-gazety izy ireo ary hivarotra amin'ny vondrom-piarahamonina hafa. Ny papelon avy amin'ny fary dia manana endrika conical, mirefy 20 santimetatra eo ho eo ny haavony ary 10 ka hatramin'ny 15 centimetatra ny fotony. Ampiasaina amin'ny ankapobeny izy io mba hanamamy ny sôkôla na kafe, hanaovana ny voasarimakirana na voajanahary amin'ny voasarimakirana.
Passion an'i Kristy
Amin'ny fahatongavan'ny Herinandro Masina, toy ny any Espana, dia mandeha any am-piangonana ny mpiangona mba hanao sorona sy hetsika hahatsiarovana ny asa nataon'ilay Zanak'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Saingy any Venezoelà dia misy koa a fanehoana ampahibemaso izay mandingana ny andro farany an'i Kristy eto an-tany. Amin'ireo fanehoana ireo dia afaka ahitantsika ny Passion sy ny fahafatesan'i Kristy, nahitana seho 15 izay mitantara ny tantaran'i Jesosy Kristy.
fa tsy ny fahazotoana sy ny fahafatesan'i Kristy ihany no aseho, fa koa ny seho amin'ny fidiran'i Kristy ho any Jerosalema, ny fihamaroan'ny mofo, ny Fanasana Masina, ny sahan'ny oliva, ny Via Crucis, ny Fitsanganana amin'ny maty, ny fanomboana azy.
Fandoroana an'i Jodasy
Ny fandoroana an'i Jodasy dia iray amin'ireo fomban-drazana ao Venezoela izay maneho ny ny tsy fahafaham-pon'ny fiarahamonina amin'ny hetsika politika ary koa ny fihetsik'izy ireo amin'ny ankapobeny, fa io koa dia mamarana ny Karemy amin'ny fanomanana ny fitsanganany amin'ny taona ho avy. Ny anton'ireny fandoroana ireny dia ny fahatsiarovana ny famadihan'i Jodasy an'i Kristy, izay milaza ny famadihan'ny toetra ny olony. Ny saribakoly Jodasy mandoro dia vita amin'ny lamba, mena mena ary lamba rovitra, feno afomanga, izay dorana rehefa manantona sy mandoro ilay saribakoly.
Ny satroka dia ny Ny loharanom-bola lehibe ao amin'ny Nosy Margarita. Na eo aza ny fisehony tsotra, ny fanamboarana tanana ireo satroka ireo dia tsy tsotra ary mitaky fahaiza-manao be vao afaka mamorona azy ireo. Ity karazana satroka ity dia efa ela no nanaiky be loatra ny firenena sy ny nosy Karaiba, saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nihena kely ny famokarana, mifanaraka amin'ny filàna ankehitriny. Ankoatry ny satroka miaraka amin'ny tsiry, dia manamboatra kitapo, rugs, cap ...
Paraky sy kalila
Ny zava-kanto amin'ny fampitomboana sy fanaovana sigara dia voatahiry ho iray amin'ireo fomban-drazana Venezoeliana, na dia tato anatin'ny taona vitsivitsy aza dia misy hetsika hafa mahomby kokoa amin'ny famokarana toekarena. maka toerana aoriana ny famokarana sigara. Ny famokarana sigara dia mizara ho Calilla, hanaovana sigara manify amin'ny fitaovana voafantina. Etsy ankilany dia manana ny Paraky, izay kendrena amin'ny famokarana betsaka sy tsy tapaka. Taloha dia amidy eraky ny firenena ny paraky, fa noho ny fihenan'ny fihenana, dia ny fanjakana sy ny fiarahamonina ao Los Millanes ihany no mandany azy, izay ahitana ny ankamaroan'ny fambolena an'io zavamaniry io.
Fomban-drazana mpanao asa tanana Venezoeliana
Anisan'ireo vokatra asa-tànana nentim-paharazana izay novokarina tany Venezoela, isika dia afaka mahita singa haingon-trano, sakafo, zava-pisotro, seramika, Caesarias, toaka, fitaovana, sary hosodoko, lamba, kiraro, akanjo, mpanefy volamena, haingon-trano, zavatra vita amin'ny hazo, fandriana mihantona, fandriana mihantona ... Ireto Ny fomba fanaovana asa tanana dia mamela ny mponina asehoy ny fomba fiainana sy ny fanahin'ny Venezoeliana.
Fomban-drazana noely any Venezoelà
Amin'ny maha-olona mpivavaka be ahy, miaraka amin'ny fahatongavan'ny Krismasy, iray amin'ireo fomban-drazana Venezoeliana dia ny isaky ny vazan'i Venezoela miomana amin'ny fahatongavan'i Jesosy zazakely. Amin'ny fiandohan'ny volana Desambra dia manomboka hita ny fifaliana amin'ireo daty manakaiky ary ny fivoriana, toast, fankalazana hankalazana ny fahatongavan'i Jesosy zazakely isaky ny vazan-tany dia miha mahazo vahana. Fa ho fanampin'izany dia ahitantsika ireo fisehoan-javatra hafa ihany koa fa amin'ny coscones dia afaka manitatra ny fankalazana ny Krismasy hatramin'ny volana febroary, toy ny bonus amin'ny Krismasy, ny fihinanam-bilona, ​​ny valizy, ny Krismasy Krismasy, ny matso, ny skateboards, ny dihin'ny mpiandry ondry, ny andro an'ny Holy Innocents, ny fahatongavan'ireo Magy, ny taona vaovao, ny taona taloha ...
Manantena izahay fa tianao daholo ireo Fomban-drazana Venezoeliana na dia efa naniry bebe kokoa aza ianao, eto dia azonao atao ny mamaky ireto fomba amam-panao any Venezoela mahazatra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fomban-drazana an'i Venezoela
HildA DE MIRABAL dia hoy izy:
Tiako ny tanindrazako, Venezoelà, tsara tarehy, tsy mila mitsiriritra firenena na inona na inona isika, satria manana ny zava-drehetra, sary, tora-pasika, tendrombohitra, renirano, sns. Tiako ny fireneko, tsy manova azy na inona na inona aho, tiako ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panaony
Valio amin'i hildA DE MIRABAL
brian pinto dia hoy izy:
Ity no tany mamokatra ronono sy tantely! Amena ...
Mamaly an'i brian pinto
leanyeli varela guillen dia hoy izy:
Q famonoana olona mahatsiravina politika maloto tena ratsy tarehy
Mamaly an'i leanyeli varela guillen
EMMA SANCHEZ GARCIA. dia hoy izy:
Salama avy any Táchira faritra tsara tarehy nijanona izahay, ho ahy ho tampon'ny lanitra izy ireo, ka izany no mahafinaritra, ry Venezoelà, tsy mila mitsiriritra firenena na inona na inona isika, satria manana ny zava-drehetra, sary, tora-pasika, tendrombohitra, renirano, Sns Tiako ny fireneko, tsy manova azy na inona na inona aho, tiako ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panaony. Avy amin'i La Grita.
Valiny amin'i EMMA SANCHEZ GARCIA.
voninkazo malazo maivana prada dia hoy izy:
Salama avy any Mamporal Venezoelà dia firenena lehibe tokoa ary kolontsaina maro no manana zavatra maro izay azoko sy azontsika rehetra ankafizina ary ireo zavatra ireo dia renirano, morontsiraka, valan-javaboary, tendrombohitra ary zavatra maro hafa izay manana ny sainan'i Venezoela, ny hirany ary mazava ho azy tanindrazana efa a hoe any Venezoelà dia tsy mahazo sakafo ianao ary mandre fotsiny amin'ny vaovao fandrobana madio, miova tsikelikely ny fireneko, fantatro, ary tsy mihemotra fa mandroso ary ho an'izay irery dia tsy hiova aho, na ny volamena aza Venezoelà.
Mamaly an'i luz angelinys flores prada
reicherd dia hoy izy:
Venezoela dia firenena lehibe dia lehibe ary kolontsaina maro no manana zavatra maro izay azoko sy azontsika rehetra ankafizina ary ireo zavatra ireo dia renirano, morontsiraka, valan-javaboary, tendrombohitra ary zavatra maro hafa manana ny fanevan'i Venezoela, ny hirany ary mazava ho azy tanindrazana efa ao Venezoela Ianao tsy mahazo sakafo ary ny vaovao ihany no henonao, ny halatra madio, hiova tsikelikely ny fireneko, fantatro, ary tsy mihemotra fa mandroso ary ho an'izay irery dia tsy hanova an'i Venezoela aho, na dia ho an'ny volamena aza. ho ahy any an-tampon'ny lanitra dia izay no antony tsara tarehy, ry Venezoelà, tsy mila mitsiriritra firenena na inona na inona isika, satria manana ny zava-drehetra, sary, tora-pasika, tendrombohitra, renirano, sns. Tiako ny fireneko, tsy manova azy na inona na inona aho, tiako ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panaony. Avy any La Grita. Tiako ny tanindrazako, Venezoelà, mahafinaritra izany, tsy mila mitsiriritra firenena na inona na inona isika, satria manana ny zava-drehetra, sary, tora-pasika, tendrombohitra, renirano, sns. Tiako ny fireneko, tsy manova azy na inona na inona aho, tiako ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panaony
Mamaly an'i reicherd
Keudys Garcia dia hoy izy:
Ny fireneko no tsara indrindra, manana ny fomba sy fomban-drazana tsara indrindra izy
Mamaly an'i Keudys garcia
veronica jaramillo dia hoy izy:
Salama, izaho dia Verónica Jaramillo ary Tigres aho, tiako ity fampiofanana ity, antenaiko fa ho toy izany daholo ny pejy miaraka amina foto-kevitra maro.
Mamaly an'i verónica Jaramillo
danisy dia hoy izy:
Mamaly an'i danisy
Misaotra nametraka ity pejy ity
zoraida ramarez dia hoy izy:
Na eo aza ny toe-javatra iainantsika, Venezoela no firenena tsara indrindra .. Tiako izy ary hitohy eto .. ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazany .. Andean aho ary tsy misy olona tsara sy miasa mafy toa ny Gochos
Mamaly an'i zoraida ramarez
jon mayorca dia hoy izy:
Salama, mitady sipa aho hoy 33
Mamaly an'i jon mayorca
ITY NETWORK IZAO dia tena mangatsiaka tokoa ny mahita kely an'i VENEZUELA sy ny fomban'izy ireo
Valiny amin'i ALEJANDRA
Glorianny dia hoy izy:
Tiako ny fireneko, io no tsara indrindra eto an-tany ary na dia tsy dia salama tsara aza isika amin'izao fotoana izao, fantatro fa hiala eto amin'ity firenena ity ny Venezoeliana… Miaraka amin'ny fireneko aho…. Vahoaka mpiady isika ary hiaro azy amin'ny sarany rehetra….
Valiny tamin'i Glorianny
loco dia hoy izy:
Mamaly ny adala
johana gonzalez dia hoy izy:
tena tsara fa ny tolo-kevitra dia tsy ny papelones de Tacarigua, ny sary dia avy amin'ny vohitra Quebrada Negra an'ny tanàna Seboruco, Fanjakan'i Tachira
Mamaly an'i johana gonzalez
yonelkis ugas dia hoy izy:
Tiako ity lahatsoratra ity…. Tsara dia tsara izy ary mazava ho azy tiako ity .arahaba anao aho…. # Amovenezuela
Mamaly an'i yonelkis ugas
Akanjo kiobanina, akanjo any Cuba
Ahoana ny fomba handehanana avy any Havana mankany Varadero